Nhau - Maitiro ekugadzira ako ega hunyanzvi neCasting Epoxy Resin?
Iyo kambani Hangzhou Dely Technology Co., Ltd.
Wood Tafura Epoxy Resin
Kuvaka PU Sealant
Maitiro ekugadzira ako ega hunyanzvi neCasting Epoxy Resin?
DIY vanofarira vanogona kugadzira zviri nyore zvidimbu zvega zvega vachishandisa epoxy resin.Nekuda kwekusiyana-siyana kweiyo synthetic resin, hapana miganhu yekugadzira mukugadzira.Iyo yekristaro yakajeka zvinhu inova chaiyo-inobata ziso ine zvidiki zvakabatanidzwa zvinhu zvakaita semaruva, maparera kana glitter particles.Chinyorwa chinotevera chinopa matipi akakosha uye matipi anosanganisira mirairo yekugadzira epoxy resin mhizha.
Sei kukanda epoxy resin kwakakurumbira muzvinhu zveDIY?
Pane zvikamu zviviri zvekukanda epoxy resin, A chikamu epoxy resin uye B chikamu chinoomesa.Kusanganisa kwavo chiyero ndeye 1: 1 nevhoriyamu, izvo zviri nyore kune DIY hobbies kana vanotanga.Haisi hwema paunenge uchikanda.Uye imvura, yakaderera viscosity yakanaka kune mold.Kune akawanda mazano aunogona kuedza uye matekiniki anobatanidzwa ese ari nyore uye anenge munhu wese anogona kuzviita.
Unogona kutenga zvigadzirwa zviri nyore kubva kuzvitoro zvekugadzira zvemuno kana kune zvakawanda zvigadzirwa zviripo online.Nenzira iyi iwe unogona kutanga yako resin craft projekiti uchishandisa inowanika mold.Kune rumwe rutivi, kana iwe uine ruzivo rwakanyanya, unogona kutanga kubva pakatanga uye tanga nekugadzira yako mold.Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kugadzirisa hunyanzvi hwako zvakanyanya.Kune akawanda tutorials uye mavhidhiyo anowanikwa online pane Maitiro ekugadzira epoxy resin crafts, pamwe neworkshops uye makosi aunogona kutora.
Ndezvipi Zvekushandisa zvaunoda paunenge uchiita?
Kugadzirira kunogara kuchikosha, saka ndezvipi zvinhu zvaunoda kuti utange?
● Kukanda Epoxy Resin
● Epoxy Resin Mold (unogona kugadzira yako)
● Resin mavara uye pigments
● Fillers: glitter, maruva akaomeswa, mabhesi, mapikicha nezvimwe.
● Pepa reWax kana kuti Resin Work Mat
● Magurovhosi eLatex
● Makapu maduku ekuyeresa matatu kana kupfuura
● Svina bhodhoro recondiment (optional)
● Blow Dryer, Toothpicks uye mashoma popsicle tumiti
● Bhokisi risina chinhu kana kuti mudziyo wekuvhara basa rako
● Quick Drying Adhesive
Nzira yekugadzira mhizha yako?
Pano tiri kugovera madhairekitori eMaitiro ekugadzira yako DIY hunyanzvi ne epoxy resin sematanho anotevera:
Isa bepa rako rewakisi pasi uye uve nezvose zvakagadzirira kushanda nazvo patafura yako yebasa, munzvimbo ine mhepo inofefetera.Bepa rewakisi kana meti yeresin iripo kungonhonga chero resin inogona kudonha pasi.Ita shuwa kuti une tafura yezinga, saka musanganiswa we resin unogonawo kuramba uri kunyangwe panguva yekurapa.
Isa mafirita ako uye zvimwe zvese zvekushandisa kunze, iwe uchibatikana nenzvimbo ino resin yako uye kuomesa mune imwe mvura inopisa.Kudziisa kunobatsira kudzivirira chero mabhuru emhepo uye zvakare musanganiswa unosanganisa zvakanyanya.
3.2 Resin Kusanganiswa uye kupenda
Yako Casting Epoxy Resin iri nyore kushanda nayo.Iwe une Resin yako uye yakaomesesa yako, iyo yaunobva wasanganisa muchiyero che1: 1, kana zvikamu zvakaenzana zvechimwe nechimwe.Iwe unofanirwa kutevedzera mirairo iri pamavara chaizvo.Muchava nemikombe miviri yokuyeresa, imwe yetsvina uye imwe yehadzisi, imwe neimwe ine zviyero zvakafanana mukati.Sanganisa izvi mune imwe kapu zvakakwana, kuve nechokwadi chekukwenya mativi uye pasi pekapu.
Iwe unogona ikozvino kuwedzera resin yako ruvara kumusanganiswa, nyatso sanganisa neyako yekusanganisa chishandiso kana Popsicle stick.Panguva ino, iwe unogona zvakare kuwedzera glitter kumusanganiswa.Kana iwe uchida kugadzira anopfuura rumwe ruvara, iwe uchafanirwa kugadzira aya mumakapu akasiyana nemusanganiswa wako we resin.
3.3 Maitiro ekukanda
Kana wapedza kusanganisa, unogona kudira muforoma yako.Iwe unogona zvakare kudurura resin yako mubhodhoro recondiment, kuti uwedzere kudurura.
Kuwedzera filler: Chekutanga, dururira resin muforoma yako wobva wawedzera zvinhu zvako.Kana uchida, dururira imwe dhizaini resin pamusoro pechinhu chacho.Chenjera kuti usazadze mold yako zvakanyanya.
Kana resin yako yadirwa, tora toothpick kuti mabubbles ese abude.Iwe unogona zvakare kutora hairdryer pane yakaderera ine kupisa kwakanyanya, asi ita shuwa yekuibatirira kure uye zvishoma nezvishoma kuiunza yakananga pasi.Iwe haudi kuridza resin kubva mukuumbwa kwako.Sezvo iri chidimbu chidiki, mazino anofanira kunge akanaka.
3.4 Chisiya chapora
Iyo resin inotora maawa gumi nemaviri kusvika ku24 kuti irape zvachose pa 25 degrees C. Nguva yekupedzisira yakaoma inobva pakupisa uye kusanganiswa kwehuwandu.Ita shuwa yekuvhara nebhokisi kana mudziyo, kuitira kuti pasave neguruva kana chimwe chinhu chingapinda muresin yako ichiri kurapa.
Kana iyo resin yanyatsopora, unogona kubvisa zvinhu izvo zvinoumba mold.Iyo chaiyo yekurapa nguva inofanirwa kunge iri pane resin chigadzirwa label pamwe nemirairo.Dzimwe nguva mipendero yakapinza inoita, saka bata nekungwarira paunenge uchidhiza chinhu chako.
Iwe unogona zvakare kushandisa mold yekuburitsa spray, iyo inobatsira nedhizaini maitiro.Iyi pfapfaidzo inofanira kuiswa usati wadira musanganiswa wako we resin muforoma.
3.6 Kupenya uye kupedza
Kana uchinge wagadzira chinhu chako uye wawana mimwe mipendero yakapinza, unogona kubvisa izvi neyakatsetseka-grit sandpaper.Kuti uwane kupenya kwakanaka, unogona zvakare kushandisa imwe resin polishing paste.Isa polish nejira rakapfava.Kushandisa Crystal Clear Resin kuchawedzerawo kune yakajeka gloss maitiro.Kana kuti inogona kuve nemichina yehunyanzvi yekupolisha kamwe yainoida.
Mazano ekubatsira yako Epoxy Resin mhizha kugara kwenguva refu
● Cherechedza kunaka kweresin uye rudzi.Epoxy Resins ndiyo yakanakira rudzi urwu rwehunyanzvi.Iyo resin inogadzirirwa kudhiza kana kuumba?Ndeupi mhando yakanaka?Nguva dzose funga nezvemibvunzo iyi.
● Yese Resin yellow's overtime, asi zvinoenderana nerudzi, unogona kuwana zvigadzirwa zvinorebesa nguva isati yatanga yero.
● Iwe uchiri kufanira kuchengeta uye kuchengeta mhizha yako yeresin kure nechiedza chezuva.
● Usasiya mabasa ako emaoko apo pane kupisa kwakanyanya, sezvo anogona kukuvara.Semuenzaniso, usaisiye yakagara muchiedza chezuva mumotokari yako.
● Resin inogona kutora mavanga pamusoro.Zvakadai sekunge iwe ukagadzira resin mhete kana zvishongo, zvirinani kuve nehanya kana iwe waita basa.Makirimu mazhinji, mafuta ekuzora, pefiyumu anogona kunge aine makemikari anogona kukonzera kukuvara kwenguva refu, kunyanya makemikari ane hutsinye akadai seanobvisa zvipikiri.Edza kurangarira kubvisa mhete yako usati washandisa chero ipi zvayo yezvigadzirwa izvi.
● Chengetedza mabasa ako emaoko mumudziyo unotonhorera, une rima, usingapindi mhepo.
Nguva yekutumira: Nov-09-2021
Hangzhou Dely Technology Co., Ltd. (Dely Technology), yakavambwa muna 2002, inonyanya kuzivikanwa yakakosha bonding solutions inobatanidza tsvagiridzo.
© Copyright 20202021 : Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.>